Seranam-piaramanidina Ivato : Sokatra miisa 126 tra-tehaka -
AccueilSongandinaSeranam-piaramanidina Ivato : Sokatra miisa 126 tra-tehaka
Seranam-piaramanidina Ivato : Sokatra miisa 126 tra-tehaka
Sokatra “radiata” miisa 126, natao tanaty valizy lehibe miisa roa indray no sarona teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato ny tolakandron’ny alakamisy lasa teo, tokony ho tamin’ny 03 ora sy 20 minitra . Araka ny loharanom-baovao avy eny an-toerana, dia nentina tamin’ny zotra Kenya Airways izay hihazo an’i Vietnam ireo harem-pirenena ireo, izao tra-tehaka izao. Nampiahiahy ireo tompon’andraikitra teny an-toerana ny fihetsiky ny lehilahy iray, ka rehefa natao ny fisavana ny entany, dia izao nahatrarana sokatra zato mahery izao. Fantatra fa “assistant parlementaire” avy any amin’ny faritr’i Toliara iny ity tompon’antoka ity. Nampiasa “passeport de service” niaraka tamin’ny “ordre de mission” hosoka, izay nisy ny sonian’ny filohan’ny antenimieram-pirenena ity farany tamin’ny fanatanterahana izany. Isan’ny ezaka napetraky ny fitondram-panjakana ny ady atao amin’ny fanondranana an-tsokosoko ireo zava-boary sy ireo harem-pirenena , izay marihina fa mandray anjara amin’izany hatramin’ireo teratany vahiny, izay matetika dia mpandray ny entana.
Ny teo anivon’ny ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Haivoary moa dia mandray ny andraikitra avy hatrany amin’ny tranga tahaka izao. Hentitra moa ny minisitry ny Tontolo Iainana Dahimananjara Johanita amin’ny fampiharana ny fepetra hisorohana ny fandrobana ny harem-pirenena malagasy
Efa maro no voasambotra saingy mbola misy ihany koa ireo tsy fay ka mbola minia manao sy manohy ny asa ratsiny hatrany. Tsara tsindriana ihany koa fa voarara tanteraka ny fanondrana ity biby ity eto amintsika. Azon’ny olon-drehetra hatao tsara kosa anefa ny manondrana ireo harem-pirenena toa ny volamena, rehefa manaraka ireo dingana ara-dalàna rehetra sy manana taratasy fahazoan-dalana mazava ahafahana manao izany. Noho ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola diso tafahoatra anefa, dia aleon’ireo olon-dratsy mandika lalàna sy manondrana izany an-tsokosoko. Tsara ampahatsiahivina hatrany tokoa mantsy fa vola be no mihodina ao ambadik’ity asa maloto ity, ka izay no antony mampirongatra sy tsy mety mahafoana azy. Efa nilaza ary nanamafy izay nolazainy anefa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa tsy hitsitsy na hisangy amin’ireo fanetriben’ny firenena sy ireo mpamadika tanindrazana tratra manao ity asa ratsy ity. Araka ny lalàna 2015-018, dia fanafonjana roa ka hatramin’ny 10 taona an-tranomaizina miampy fandoavana onitra 100 ka hatramin’ny 200 tapitrisa Ariary no miandry ireo izay manao ity fanondranana harem-pirenena an-tsokosoko ity. Mbola mitohy moa ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity sy ny fikarohana ireo olona hafa izay heverina fa niray tsikombakomba sy voasaringotra amin’izany.
เพิ่มยอดไลค์ dans Kaomina Renivohitra Antananarivo-MIEZAKA MANAKANA NY TETIKASAN’NY FILOHA
Mazava tsara tokoa ny voalazan’ ny lalana mikasika ny fifamoivoizana fa tsy misy hafa tsy ireo filohana andrim-panjakana irery ihany no afaka mampiasa ‘’moto ’’ ho mpialoha lalana azy ireo. Voalazan ‘ny andininy faha – ...Tohiny
Mpampianatra mitokona : Norarafan’ny MAPAR baomba lakrimôzena
เพิ่มยอดไลค์: ปั้มไลค์เพจ Facebook, ปั้มเพจเฟสบุ๊ค, แฟนเพจพร้อมยอดไลค์, เพิ่ม Like, ปั้มไลค์ฟรี, Add Like Fanpage, รับ Like Fanpage, ปั้มไลค์ครบวงจร, ไลค์เพจ, ปั้มไลค์สถานะ, โกงไลค์, ปั้มโพสต์, บริการเพิ่มไลค์แฟนเพจฟรี, ปั้มเพจ,…